Diamond Inya Palace, Main Sponsor at AYA Home Loan Launch - Yangon, Myanmar
Diamond Inya Palace, Main Sponsor at AYA Home Loan Launch
Event organized by EMG Marketing Group
သင့်မိသားစု နားခိုရာ အိမ်ကလေးကို အချက်အချာကျ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းပြီး ၀န်ဆောင်မှုကောင်းကောင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီအခန်းမှာ နေထိုင်ဖို့ရှာဖွေနေပါသလား???
ဒါဆိုရင်တော့ လာမည့် မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့ မှ ဧပြီလ (၂) ရက်နေ့ အထိ Novotel Hotel Yangon Max မှာကျင်းပမည့် AYA Home Loan Launch ပွဲကြီးရဲ့ DIAMOND INYA PALACE CONDOMINIUM Booth ကိုသာ အရောက်လှမ်းလာခဲ့လိုက်တော့နော်…
ဒီပွဲကြီးမှာ Diamond Inya Palace Condominium မှ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီကွန်ဒိုများကို နှစ်ရှည်အရစ်ကျစနစ်၊ နှစ်တိုအရစ်ကျစနစ်၊ အထူးဈေးနှုန်းတွေနဲ့ ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး Cash Down ၀ယ်ယူမယ့်သူတွေ အတွက်လည်း နှစ်သစ်ကူးအထူးပရိုမိုးရှင်း အစီအစဉ်တွေရှိတာကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အကြီးဆုံး AYA Home Loan Launch အိမ်ရာအရောင်းပြပွဲကြီးရဲ့ Diamond Inya Palace Condominium အရောင်းပြခန်းကိုသာ ကြွလှမ်းခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်…
AYA Home Loan ပွဲတော်ကို Diamond Inya Palace မှ main sponsor အဖြစ် အဓိက ပံ့ပိုးကူညီ ပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် AYA Home Loan Launch အိမ်ရာအရောင်းပြပွဲကြီးမှာ သိန်း (၁၀၀) ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ Lucky Draw အစီအစဉ်များ၊ BKK Food Fair ၊ ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်များနှင့် သားသားမီးမီးတို့အတွက် Kids Zone ကစားကွင်းကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
ကဲ… လက်မလွတ်သင့်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ အများကြီးစီစဉ်ပေးထားလို့ AYA Home Loan Launch အိမ်ရာအရောင်းပြပွဲကြီးကို အရောက်လှမ်းလာခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
သင့်အိပ်မက်ထဲက အိမ်လေး တကယ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီ!
AYA Home Loan Launch မှာ အိမ်ဝယ်ရန် စီစဉ်ထားသူများ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေအတွက် www.ayabank.com/homeloan မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
***DIAMOND INYA PALACE at AYA Home Loan Launch***
(31.3.2018) Saturday - 12 PM to 8 PM
(1.4.2018) Sunday - 10 AM to 8 PM
(2.4.2018) Monday - 10 AM to 8 PM
459 Pyay Road, Kamayut Tsp, Yangon, 0000, Myanmar